Jawaabta ka timid AKP iyo MHP ee loo yaqaan 'NYT Abonman Ticket Hike' RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraJawaabta AKP iyo MHP ee Tikidhada Tikidhada ee Xij
24 / 01 / 2020 06 Ankara, 26 Eskisehir, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
tikidhada yht tigidhada tigidhada iyo ficilcelinta mhp
Kordhinta TCDD ee aadka u sarreeya ee Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) ayaa sidoo kale ka yimid AKP iyo MHP. Afhayeenka baarlamaanka AKP Orhan Durmuş wuxuu yiri, "Suuragal maahan in la cabsi geliyo safarkan," halka MHP Eskişehir Ku-xigeenka Nurullah Sazak uu su'aal u gudbiyay Golaha Qaranka ee Turkiga.
“TCDD-du waxay tiri annagu ma aanan sameynin, laakiin haddii buuq noocaas ahi jiro, suuragal uma ahan inaan qodno. Ma aqbali karno kororka noocan oo kale ah markii muwaadinku uu mar horeba dhibaato ku jiro, ayuu yidhi.
Tuuladaani macno malahan. Tan si sax ah uma arki karo. Xilligaas oo kale markuu muwaadinku la il daran yahay maciishadda, tan kama joogsaneyso. Waxaan sameyn doonaa intii karaankeena ah ka hor xafladaheena si aan dib uugu celino. Sababtoo ah tani waa xaalad dhib ku haysa muwaadinka. Socdaalku sidan oo kale ma sarrayn doono. ”
Kuxigeenka MHP Eski Deputyehir Metin Nurullah Sazak wuxuu sidoo kale weydiiyay su'aal suaal ah Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan oo laxiriira kororka qiimaha macaamiisha ee loo yaqaan 'NYT'. Nurullah Sazak wuxuu yidhi, "Safarradan waa in si deg deg ah dib loogu eegaa" wuxuuna caddeeyay inuu la socon doono xaaladda Isagoo carrabka ku adkeeyay "muwaadiniinteenna isku hagaajiya miisaaniyadooda iyadoo la raacayo qiimaha iibka waa in aan la dhibaateyn", Sazak oo ka socda MHP ayaa u gudbiyay su'aalaha soo socda Wasiirka Cahit Turhan:
Maxay yihiin qiimayaasha cusub sababa la xiriira beddelka sicir-dhimista loogu talagalay kaararka diiwaangelinta? Waa maxay sababta sare u kaca qiimaha sicirka 30 maalmood loogu tala galay? Maxaa loo beddelay sicir-dhimista tikidhadan?
Ma loo qorsheeyay in la yareeyo kororka qiimayaasha ilaa heer macquul ah iyada oo dib loo eegayo sicir-dhimista kaararka diiwaangelinta ee la door bidaa gaar ahaan shaqaalaha iyo ardayda?
Ma loo qorsheeyay in si cad loogula wadaago qiimayaasha dadweynaha si loo baabi'iyo wasakheynta macluumaadka bulshada?
Waa maxay cadadka qiima dhimista ee lagu dabaqay internetka iyo kanaalada iibka mobilada? Ma isbadal baa ku yimid tiradaan?
Maxaa loo dhimay qiima dhimistii baabuur-ganacsi sida carruurta, dhalinyarada, macallimiinta, saxaafadda, 60-64 sano iyo wixii ka weyn 65 sano?
MHP Madaxa Degmada Inegol Bedir Jawaab Gaadhida Gaadiidka
MHP Karakaya: AKP kama hayso balanqaadkeeda ku saabsan magaalo ee Adana ee sanadka 5
Jawaab ka yimid Zamma Peker ee magaalada Sivas
Waxqabadka Kabaha Baabuurta
Kadib ardaydan, Xubin Baarlamaanka Süzer ayaa ku jawaabay Estram Hike
Jawaab celinta socodka gaadiidka ee Izmir
Batman-Diyarbakir Tababaraha Tareenka
Bursaalan waxay wax ka qabteen Bursaray oo ku socotay Twitter
CHP ka Samsun ilaa taraamka si kor loogu qaado falcelinta
Jawaab-celinta gaadiidka ee ka imaanaya Pensioners Pension
Mas'uuliyiinta weeraray shacabka muwaadiniinta u diidaya inay Zamma qarsoodi ka dhigaan IZBAN
Khidmadaha Xawaaraha Xawaaraha Sare
Tigidhada Xayeysashada YHT
Tigidhada Xiitaa ee Diiwaangelinta Xiis
Qiimaha macaamiisha ee loo yaqaan 'NYT'